ခရစ္စမတ်ပါတီငယ်မင်းသားတစ်ဦးရစ်သရဖူအောင်ဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
Самый простой способ — сделать корону из бумаги или картона. Даже если Вы не обладаете хорошими навыками в рисовании, ведь можно распечатать уже готовую корону, просто вырезать и склеить ее и корона готова!
Скачать такую заготовку можно на этом сайте — အညွှန်း.
: သင်ထိုကဲ့သို့သောဒီဓာတ်ပုံအဖြစ်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပန်းဦးရစ်သရဖူကို, စေနိုင်သည်
ရှစ်ခလုတ် (သတ္တု) နှင့် crystals (တိုင်းခလုတ်လေးသောအရာတို့ကို);
Посмотреть процесс изготовления можно здесь — LINK ။
တော်ဝင်ကြောင့်နှင့်မင်းသမီးသရဖူကိုနှင့်အတူတူပင်မင်းသား။ ဒီတော့တစ်ခု universal ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုလုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။ ၏သင်တန်းကိုမှန်ကန်ခမ်းနားနှင့်ရွှေ) ။
ဒီအတှကျအကြှနျုပျတို့လို ... ဇာ!
ဟုတ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဇာဖြစ်တယ်။ ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ပိုပြီးတင်းတင်းကျပ်ကျပ်တတ်နိုင်သမျှ။
အဖြူရောင်ကော်အတူဇာ lubricates ။ မာကြောနိုင်ရန်အတွက်ဒီအကြိမ်အနည်းငယ်လုပ်နေတာ။ တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်, နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ခွောကျသှေ့ကြကုန်အံ့။
ကျနော်တို့ဇာကို turn off နှင့်ချိတ်ဆက်သို့မဟုတ်ပူကော်, ဒါမှမဟုတ်ပဲချုပ်။
လုပ်နိုင်သော, သင် rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်, ပုတီးနှင့်အတူအလှဆင်နိုင်ပါတယ်။
ကောင်းပြီ, သင်သည်အဘယ်သို့မင်းသား? မ)
ဤသည်ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုအလွန်မထိုက်မတန်နုပျိုမင်းများနှင့်ရှင်ဘုရင်၏သားဖြစ်၏။ ဒါဟာတူညီတဲ့မှတရားမျှတစွာမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ဘဲ, လွင်ပြင်စက္ကူအလွန်ခက်ခဲသည်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့စက္ကူကတ်ကြေး, ကော် PVA လိုအပ်ပါတယ်။ (။5*5စင်တီမီတာ): cut ကျွန်တော်တို့ကိုရင်ပြင်သို့စက္ကူနှင့်ဒါလိုပဲထောင့်ဖြတ်တစ်ဦးချင်းစီစတုရန်းခေါက်ပြုတ်
တြိဂံကော်၏အောက်ပိုင်းထောင့်တစ်ဦးနှင့်အတူအမဲဆီ (သာရှေ့ဘက်ခြမ်းကလျှောက်ထား) နှင့်ပုံထဲမှာရှိသကဲ့သို့, အခြားသို့ထည့်သွင်း:
သင်အလိုရှိသောအရွယ်အစားကိုရောက်ရှိသည်အထိအလားတူပင်ကော်နှင့်အခြားတြိဂံ။ ရသင့်တယ်ထိုကဲ့သို့သော Quote ဖြစ်၏ girlyandaquot;
အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုထုတ်ဖေါ်နှင့်အခြားတြိဂံနှစ်ခုလုံးကြီးစွန်းပေါ်တွင်ကော်ချပြီး, ဆိုလိုသည်မှာအားလုံး Quote နိုင်အောင် sizing; prosvetyquot; သူတို့ကဖြည့်ခဲ့ကြသည်:
ထို့နောက်ကျွန်တော်အခြား၌ဝတ်ဆင်, တဦးတည်းအဆုံးအပေါ်နှစ်ခုစွန်းတိုင်အောင် detali.Nanosim ကော် fastening ၏အရပျကို marking ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုလက်စွပ်ခဲတံမှဖွင့်နှင့်အပေါငျးတို့သပုံနှိပျ, ထိုလုလင်သည်မင်းသားအဘို့ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Все дети очень любят праздники и с нетерпением ждут их — учат стихи, песенки, помогают маме или бабушке делать карнавальный костюм!
Быть на новогоднем утреннике королм, царевичем или просто скромным маленьким принцем — это очень красиво, вокруг столько прелестных принцесс в роскошных нарядах!
Обязательно надо сделать плащ, укороченные брючки — бриджи, белые гольфы, на белую рубашку пришить кружевное жабо с брошкой на груди, а на голове у него должна быть корона.
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ: Костюмы — короля, царевича, принца.
ထူသောကတ်ထူပြားများထဲကရဖို့အရိုးရှင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကိုသရဖူသည်, ပိုကောင်းတဲ့အဝါရောင်အရောင်ဖြတ်နေသည်, သင်မူကားရွှေရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ Esze lurex နှင့်အတူသတ္တုပါးသို့မဟုတ်အထည်နှင့်အတူကတ်ထူပြား paste လုပ်ထားတဲ့နိုင်ပါသည်။
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ: Четыре варианта — короны для мальчика.
ပန်းဦးရစ်သရဖူကိုအရွယ်အစားလျှော့ချဖို့ဦးခေါင်း rebnka girth တိုင်းတာခဲ့ကြသည်။
Начертите на картоне корону с помощью линейки и карандаша, прибавьте2—3см для склеивания и регулирования короны.
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ: ကောင်လေးကတစ်ဦးပွဲတော်ဝတ်စုံ၏သေံအတွက်ဖြစ်နိုင်သည် Crown ။
Украшения можно сделать разные, наклеить или пришить: по центру самый яркий и крупный элемент, вокруг — по ободку короны симметрично расположенные бусины или пайетки. Низ короны красиво будет смотреться, если приклеить по кругу блестящую тесьму.
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ: Инструкция — как сделать корону своими руками.
ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ: နှစ်ခုမျိုးကွဲပန်းဦးရစ်သရဖူကို၏ဗဟိုအဘို့ကို Esze ။
20 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,595 စက္ကန့်ကျော် Generate ။